Leicester City Oo Guul-darro Xanuun Badan Loo Xambaariyey, – Axadle
Leicester City Oo Guul-darro Xanuun Badan Loo Xambaariyey,
Kooxda kubadda cagta West Ham ayaa soo afjartay guulihii xidhiidhka ahaa ee Leicester City iyo damaashaadkii ay ku jirtay, waxaanay ku garaacday 3-0 iyadoo waliba marti ahayd oo joogtay garoonka King Power.
Leicester oo toddobaadkii hore soo karbaashtay Man City oo 5-2 ay kusoo dhufatay ayaa waxay garoonkeeda ku qaabishay West Ham oo daqiiqaddii 14aad kaga naxsatay gool uu u dhaliyey laacibka orodka badan ee Michail Antonio ka hor intii aanu Pablo Fornals u raacinin goolka labaad ee qaybta horeba ay ku suuxiyeen Leicester.
Qaybtii dambe ayaanay Leicester isbeddel wax ku ool ah la imanin, sidoo kalena uu caawin waayey garoonkooda madhan, waxaana gool saddexaad ugu daray Jarrod Bowen ciyaarta oo ay toddoba daqiiqadood oo kali ahi ka hadhsan tahay.
Leicester: Schmeichel, Castagne, Amartey, Evans, Soyuncu, Justin, Perez, Tielemans, Mendy, Barnes, Vardy
Kaydka: Fofana, Albrighton, Ward, Iheanacho, Under, Choudhury, Fuchs
West Ham: Fabianski, Coufal, Balbuena, Ogbonna, Cresswell, Masuaku, Bowen, Soucek, Rice, Fornals, Antonio
Kaydka Yarmolenko, Felipe Anderson, Lanzini, Noble, Haller, Johnson, Randolph
Kulankan oo si weyn loo sugayay natiijadiisa iyo haddii Leicester City ay la iman karto bandhiggii Man City ku burburisay oo kale ayaa waxa uu tababare Brendan Rodgers keenay weeraryahankiisa Jamie Vardy oo kulamadii xili ciyaareedkan shabaqa la saaxiib ahaa, waxaana bilowgiiba ay kubadda dhawr jeer geystay xerada ganaaxa ee West Brom.
Daqiiqaddii 14aad ee ciyaarta ayay West Ham neef weyni kasoo baxday markii uu weeraryahanka Michail Antonio kubbad uu ka helay Aaron Cresswell uu shabaqa Leicester ku hubsaday, isla markaana uu ku hor damaashaaday goolhaye Schmeichel.
Leciester ayaa kaga jawaabtay weerarro ay ku qaadday goolka West Ham, waxaana iyadoo rajo ka qabta inay goolka barbarraha keeni doonto ay haddana mar kale arkeen kubadda oo goolkooda dhex-taalla, taas oo ahayd mid uu magaciisa ku qoray Pablo Fornals.
Goolka labaad ayaa waxa sidii kii hore oo kale usoo farsameeyey Aaron Cresswell oo ahaa boqorka caawinta ee kulanka, waxaanay qaybta hore kusoo dhamaatay 2-0.
Qaybtii labaad ayuu Rodgers laba beddel oo degdeg ah sameeyey, waxaanay awoodi waayeen inay kooxdooda kasoo maydhaan guul-darrada garoonkooda loogu xambaarinayo.
Daqiiqaddii 83aad ee ciyaarta ayay mar kale West Ham hoggaanka ciyaarta sii dheeraysatay, waxaana gool saddexaad u dhaliyey Jarrod Bowen.
Waqtigii dheeraadka ahaa ee ciyaarta lagu daray ayay Leicester City la timid gool uu u dhaliyey Harvey Barnes, laakiin garsooraha ciyaarta ayaa waxba kama jiraan ka dhigay, waxaanay ciyaartu kusoo dhamaatay 3-0 ay guushu ku raacday West Ham.
Dhinaca kale, Southampton ayaa 2-0 ku karbaashtay kooxda kasoo dallacday heerka labaad ee West Brom oo usbuucii hore barbarro layaab lahaa ay ku kala baxeen Chelsea.
Laba gool oo labadii qaybood ee ciyaarta ay u dhaliyeen Moussa Djenepo iyo Oriol Romeu ayaa Southampton siiyey guusha kulanka.
Manchester United Oo Waji Gabax Kale Oo Suuqa Ahi Soo